#Madagascar : Fifamoivoizana – Hisatra avokoa no tena olan’ireo mpitatitra eto an-drenivohitra | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Fifamoivoizana – Hisatra avokoa no tena olan’ireo mpitatitra eto an-drenivohitra
Maro ny fiara tsy voakarakara nefa miasa eto an-drenivohitra
Tsy maintsy mandalo fitsarana avokoa ny fiara rehetra indrindra ireo fitateram-bahoaka. Indroa mandalo fitsarana izy ireny dia etsy Nanisana sy etsy Antsakaviro. Fiara manodidina ny 50 ka hatramin’ ny 60 isan’andro no fantatra fa mandalo fizahana amin’ireo toerana roa ireo. “Fiara enina na dimy amin’ ireo 60 mandalo eto isan’andro no manana olana amin’ ny hisatra avokoa. Ankoatra izay ny resaka kodiarana sy ny jiro ary ny lafiny ara-teknika samihafa”, araka ny nambaran-dRasoloarivony Pinot, tompon’andraikitra etsy Antsakaviro. Ny etsy Nanisana kosa indray dia eo amin’ny 20 isan’andro eo no manana olana amin’ izany hisatra izany. Io resaka hisatra io avokoa no olan’ny fiarakaretsaka sy ny taksibe rehetra eto amintsika.
Fiara efatra tsy nekena
Nomarihin’ny tompon’andraikitra eny anivon’ny fitsarana fiara fa tsy mitaky fiara vaovao sy raitra izy ireo, saingy tsy maintsy hajaina kosa ny fitsipika fototra. Isan’izany ny hisatra, ny jiro, ny kodiarana izay matetika mampidi-doza. Rehefa tsy lany fitsarana toy izao ny fiara dia mbola azon’ny tompony atao tsara ny manamboatra azy vao hiverenana tsaraina indray.
Ankoatra ireo lafiny teknika ireo dia efa maro ihany koa ireo fiara izay hita fa efa tena ratsy sy simba ny vatany no tsy nahazo alalana hiasa. “Tamin’ ity volana ity izao nisy fiara efatra tena tsy nekena mihitsy ary nasaina naverin’ny tompony natao retapage sy nolokoina mihitsy”, hoy hatrany Rasoloarivony Pinot.